Granit Xhaka Oo Ka Digay Dhibaatada Arsenal Geli Doonto
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Granit Xhaka ayaa waxa uu ka digay khasaaraha weyn ee ay kooxdiisu geli doonto haddii uu ka tago weeraryahanka Pierre-Emerick Aubameyang oo 12 bilood oo kali ahi ka hadhsan yihiin heshiiskiisa.
Weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa waxa uu Arsenal kusoo biiray January 2018, waxaanu illaa hadda u saftay 97 ciyaarood oo uu ugu dhaliyey 61 ciyaarood.
Ka sokow saamaynta badan ee uu ku yeeshay Emirates, Aubameyang ayaa lala xidhiidhinayaa inuu xagaagan ka tegi doono Arsenal oo la iibin doono, haddii kalena uu qaab xor ah ku bixi doona sannadka 2021 marka uu heshiiskiisu dhamaado.
Kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid iyo Barcelona ayaa lala xidhiidhinayaa 30 jirkan, laakiin Granit Xhaka oo waraysi siiyey SportBild ayaa waxa uu ka digay in kooxdiisu ay dhayal kusii deyso laacibkan, waxaanu yidhi: “Haddii ay dhacdo inuu Aubameyang tago, dabcan waxay noqon doontaa khasaare weyn oo kooxda soo gaadhay.
“Auba mar walba waa khatar, waxaanu ku fiican yahay dhalinta goolasha iyo shaqsi ahaanba oo uu u yahay wiil wanaagsan. Mar walba waa fog togan, dhinaca fiican wax ka eega, rajo badan, aadna xirgfadle u ah.”
Xhaka waxa kale oo uu difaacay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Mesut Ozil, waxaanu yidhi: “Waxaan halkan uga arkaa inuu yahay mid togan, saaxiib la jeclaysan karo.
“Waa wiil aad dhulka isku dhiga, mar walba diyaar u ah inuu wax caawiyo, tababarkana si aad ah uga shaqeeyo, fikirkaygana waxaan qabaa inuu kubadda cagta ku raaxaysto.
“Marka Mesut uu qaab wanaagsan ku jiro, dabcan aad ayuu muhiim noogu yahay, waxaanu mar walba samayn karaa isbeddel, dhab ahaantiina maaha inaynu halkan ku falanqayno xirfaddiisa kubadda cagta.”
axadle 2207 posts
Premier League Oo Shaaciyey Tirada Taageereyaasha Iman…
Chinese, Iranian hackers focused Biden and Trump campaigns,…
Burundi court docket upholds election outcomes and…